America na -echeta ndị 9/11 tara ahụhụ afọ 20 mgbe mwakpo ụjọ ahụ gasịrị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » America na -echeta ndị 9/11 tara ahụhụ afọ 20 mgbe mwakpo ụjọ ahụ gasịrị
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ememe ncheta a abụrụla ihe a na -eme kwa afọ, mana Satọdee nwere ihe pụrụ iche, na -abịa afọ 20 ka ụtụtụ gasịrị nke ọtụtụ mmadụ na -ele anya dị ka mgbanwe na akụkọ ntolite US. Na ncheta na -egbu mgbu banyere mgbanwe ndị ahụ, naanị izu ole na ole gara aga, ndị agha US na ndị jikọrọ aka mechara mwepụ ọgba aghara n'ọgbọ agha US malitere na Afghanistan obere oge mwakpo mmegwara - nke ghọrọ agha kachasị ogologo na akụkọ ntolite US.
A kwanyeere Septemba 11 nwụrụ na ncheta afọ 20 nke mwakpo.
Onye isi ala Biden kpọrọ oku maka ịdị n'otu na ncheta afọ 20 nke 9/11.
Ememe ncheta na New York City na gburugburu mba ahụ.
Na ncheta afọ 20 nke mwakpo ndị na -eyi ọha egwu wakporo World Trade Center na Pentagon, ndị America ezukọtala icheta na ịkwanyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 2,977 nwụrụ na Septemba 11, 2001.
Ememe nzuzu nke taa na ncheta Septemba 11 na New York City malitere na oge ịgbachi nkịtị n'elekere 8:46 nke ụtụtụ (12:46 GMT), kpọmkwem oge mbụ n'ime ụgbọ elu ndị njem abụọ a tọọrọ dabara n'ime New York City World Trade Center.
Ndị ikwu nke ndị ahụ metụtara wee malite ịgụpụta aha mmadụ 2,977 nwụrụ n'ime mwakpo ahụ, bụ emume a na -eme kwa afọ nke na -ewe awa anọ.
"Anyị hụrụ gị n'anya na anyị na -atụ uche gị," ka ọtụtụ n'ime ha kwuru ka egwu violin dị egwu na -eme na mmemme gọọmentị, nke ndị isi gụnyere Onye isi ala Joe Biden na ndị bụbu onye isi ala Barack Obama na Bill Clinton gara.
Na Ground Zero na New York City, mmadụ 2,753, sitere n'akụkụ ụwa niile, nwụrụ na mgbawa mbụ, wụtuo ma nwụọ, ma ọ bụ tufuo naanị na ọkụ nke ụlọ elu dara ada.
na Pentagon, ụgbọ elu dọwara oghere na -enwu ọkụ dị n'akụkụ oghere akwara ndị agha nke ike ọchịchị, wee gbuo mmadụ 184 n'ime ụgbọ elu na n'ala.
Na Shanksville, Pennsylvania, ebili mmiri nke atọ nke ndị na -apụnara mmadụ ihe gbabara n'ọhịa mgbe ndị njem lụrụ ọgụ, na -eziga United 93 tupu ọ rute ebumnuche ya - ikekwe ụlọ US Capitol na Washington.
Ememe ncheta a abụrụla ihe a na -eme kwa afọ, mana Satọdee nwere ihe pụrụ iche, na -abịa afọ iri abụọ ụtụtụ ka ọtụtụ mmadụ na -ele anya dị ka mgbanwe na akụkọ ntolite US.
Na ncheta na -egbu mgbu banyere mgbanwe ndị ahụ, naanị izu ole na ole gara aga, ndị agha US na ndị jikọrọ aka mechara mwepụ ọgba aghara n'ọgbọ agha US malitere na Afghanistan obere oge mwakpo mmegwara - nke ghọrọ agha kachasị ogologo na akụkọ ntolite US.
Ememe ncheta taa na -abịa dị ka esemokwu mba na -ekpuchi echiche ọ bụla nke mmechi n'agbanyeghị iwe gbasara mkpochapụ Kabul, nke gụnyere ndị agha US 13 onye ogbunigwe gburu onwe ya gburu.